eNasha.com - जिन्दगी एक लोकगीत...
जिन्दगी एक लोकगीत...
बुबा गङ्गाबहादुर बस्नेत र आमा मनकुमारी बस्नेतको कोखबाट वि.सं. २००० साल असार २५ गते काठमाडौँको कमलपोखरीमा जन्मिएका कुमार बस्नेत दुइ आमाका नौ छोरा र दुइ छोरीमध्ये माइला छोरा हुन् । आमा मनकुमारी दोलखास्थित पुरानो घरमा बस्नुपर्ने भएका कारण केही समय काठमाडौमा बसेर उतै लागिन् र कुमार पनि आमासँगै त्यतै गए र त्यहाँको रहनसहन र लोकजीवनमा रमाउन थाले । २००७ सालमा कुमार बस्नेत पढ्नको लागि काठमाडौ फर्किए । पद्मोदय हाई स्कुलबाट प्रारम्भिक शिक्षाको शुरुवात गरेका कुमार बस्नेत बाल्यकालमा चकचके स्वभावका र नाच्न गाउन साथीहरुसँग घुम्न मन पराउने किसिमका थिए ।
विभिन्न मन्त्रिहरुका निजी सचिव भई काम गरिसकेका कुमार बस्नेतका बुबा आफ्ना जवानीमा साहित्य र सङ्गीतमा पनि अभिरुचि देखाउथे । त्यसकारण उनको घरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, बाशु शशिजस्ता साहित्यकारहरुको जमघट भइरहन्थ्यो । यी साहित्यकारहरु घर आएको बेला बालक बस्नेत दोलखामा बस्दा सिकेका लोकगीतहरु नाच्दै गाएर सुनाउँथे । यसरी साना तर विछट्टै रसिला यिनको कला देखेर उनीहरु ताली बजाउदै उनको हौसला बढाउने गर्थे । २००८-९ सालतिर काठमाडौ उपत्यकामा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा भैरव नृत्य दलको ठूलो पकड थियो । एकसेएक कलाकार सम्मिलित यस संस्थामा प्रवेश पाउनु त्यसबेलाका कलाकारहरुका लागि गर्वको विषय हुन्थ्यो । २००९ सालमा कुमार बस्नेत पनि घरपरिवारलाई थाहै नदिई यस संस्थामा आबद्ध भई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन थाले र डान्सरको रुपमा काठमाडौभरि चर्चित बने ।
वि.सं.२०११ सालमा बुबाको सरुवा कपिलवस्तु, तौलिहवा भएपछि उनी पनि बुवासँगै त्यहीँ पुगे र, त्यहिँको बुद्ध मा.वि.मा पढ्न थाले । त्यहीँ पढिरहेको बेला एकदिन उनको भेट जनकविकेशरी धर्मराज थापासँग भयो र उनले कमारलाई के.आइ.सिंहसँग भेट गराए ।
कुमार बस्नेतको जीवनमा यता उता सरुवा हुने क्रम अझै रोकिएन । २०१३ सालमा छोराको पर्ढाई अझ राम्रो होस् भनेर उनलाई भारतको गोरखपुर पठाइयो तर स्वाभिमानी स्वभावका बस्नेत र त्यहाँका स्थानीय साथीहरुसँगको सामान्य वादविवादले झगडाको रुप लिएपछि उनी सीधै काठमाडौ फर्किए र २०१४ सालमा बालकृष्ण समको सिफारिसमा घरमा थाहै नदिई सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि भारतको आसाम, सिलोङ पुगे । त्यहाँ उनले लोकगीत गाएर र नाचेर धमधाम नाम कमाए ।
यसरी नपढी-नपढी आसाम सिलोङ गएर अलमलिरहेका कुमारलाई नेपाल फर्काउन उनका बाबा त्यहीँ पुगे र मारसँग झपारेर फेरि पढ्न दवाब दिए । त्यसैले उनी नक्सालस्थित नन्दि रात्री मा.वि.मा पुनः पढ्न थाले । र, त्यहीँबाट २०१५ सालमा पढाइको फलामे ढोका मानिने एसएलसी पास गरे । यसलगत्तै उनी २०१६ सालदेखि त्रि-चन्द्र कलेजमा आई.कम. पढ्न थाले । यसैबीचमा उनलाई पिताजीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जागिर मिलाइदिए । यसपछि कुमार बस्नेतले जागिर, पढाई र नाचगानलाई एक साथ अगाडि बढाउदै गए ।
वि.सं.२०१६ सालमा रेडियो नेपालले नेपाली गायकगायिकाहरुको स्वरमा गीत रेकर्ड गराउनका लागि सूचना निकाल्यो । कलाप्रति हुरुक्क हुने कुमार पनि गीत गाउने उद्देश्यले अन्तरवार्ता दिन त्यहाँ पुगे । त्यहाँ त नारायणगोपाल पनि अन्तरवार्ता दिइरहेका थिए । अन्तरवार्ता लिन बसेका नातिकाजी, धर्मराज थापा, श्यामदास वैष्णव, प्रकाशमान सिंहहरुले उनलाई योग्य ठहर्‍याएपछि कुमार बस्नेतले एउटा लोकगीत 'चौतारी घ्याङ्ला नानी' र एउटा आधुनिक गीत 'रिमझिम पानी पर्ला' गीत रेकर्ड गराउने मौका पाए । त्यसको केही समयपछि रेकर्ड गरेको गीत 'ओइ नाना' बोलको गीत रेडियो नेपालमा बज्न थालेपछि उनको ख्याति आकाशिदै गयो ।
लोकगीत गाएकोमा कुमार बस्नेतलाई त्यसबेलाका साथीहरुले निकै खिसी गरे, झ्याउरे, पाखे, गाइने, लोकल गायक भनेर अनेक उपमा भिराए । यो कुराले उनलाई निकै असहृय भयो, त्यसपछि गीतार, मेण्डोलिन, भ्वाइलिनजस्ता पश्चिमी बाजाहरु बजाउदै अंग्रेजी गीत गाउन थाले । यसैताका उनले 'दिउँला यो जोवन तिमीलाई दिउँला...' जस्तो अत्याधुनिक गीत पनि रेकर्ड गराए । पछि विदेशी साथीहरुले आफ्नै मौलिकपन भएका नेपाली गीतहरु सुन्न खोजेपछि उनलाई जसले जे भने पनि आफ्नै नेपालीपन भएका ठेट गीतहरु गाउनुपर्ने रहेछ भन्ने महसूस भयो । उनको यही गीत नेपालको पहिलो पप गीत हो कि होइन भनेर विवादित पनि बन्ने गरेको छ ।
कुमार बस्नेतले राष्ट्र बैङ्कमा जागिर खाएको बेला उनको मासिक तलब रु ८० थियो तर त्यही तहका नेपाल बैङ्क लिमिटेडका कर्मचारीहरुको चाहि रु. १३५ थियो । सरकारको यस्तो असमान तलब वितरण प्रणालीबाट रुष्ट बनेका राष्ट्रबैङ्का कर्मचारीहरुले २०२० सालमा बस्नेतको नेत्तृत्वमा हडताल शुरु गरे । आन्दोलन चर्किदै गएपछि रातारात उनलाई सुब्बा पदमा बढुवा गरि सञ्चय कोषमा सरुवा गरियो ।
५ वर्षजति प्रेम गरेपछि कुमार बस्नेत र शारदा कार्कीले २०२३ साल मंसिर २ गते विवाह गरे । जसबाट उनका तीन छोरा र तीन छोरी जन्मिएका छन् । अधिकांश समय गीत सङ्गीतका कारण बाहिरै बिताउने कुमार घर बसेको बेला निकै रमाइलोसँग आफ्नो समय परिवारका साथ बिताउने गर्छन् ।
युवा अवस्थामा फुटबल, ब्याडमिन्टन खेल्न मन पराउने कुमार बस्नेतको रुचि गीत गाउनमा जत्तिकै शिकार खेल्न र माछा मार्न पनि रहेको छ । शिकारका लागि माहिर कुमार फूर्सद पाउने बित्तिकै बन्दूक र बल्छी बोकेर शिकारका लागि विभिन्न ठाउँ पुग्ने गर्थे । साथै उनी भूगोलमा पनि निकै रुचि राख्ने गर्दछन् ।
कुमार बस्नेतले अधिकांश गीतहरु तरुनीकै विषयमा गाएका छन्, गीतमार्फत् तरुनीहरुलाई निकै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् । तर उनले यस्ता गीतहरु गाएका कारण उनका छोरीहरुले स्कूल र कलेजमा निकै मार खेप्नु पर्दथ्यो ।
बस्नेतले जीवनमा निकै उतारचढावहरु देख्नुपर्‍यो । लोकगीत सङ्कलन र शिकारका लागि गाउँगाउँ डुल्न पर्ने र साथीहरुसँग बसेर मज्जाले खानु पिउनु पर्ने स्वभावका कारण उनी जागिरबाट आउने सबै पैसा घर पुर्‍यानुअघि नै सिध्याउँथे, त्यसकारण उनलाई घर्रखर्चको सधैँ अभाव भइरहन्थ्यो ।
२०३६ सालमा बालुवाटारमा घर बनाउनुअघि बस्नेतले भगवती बहालमा १८ वर्षको लामो डेराको कष्टकर जीवन बिताएका छन् । सङ्गीतमा लागेर श्रोताको मायाभन्दा बढि केही पनि हासिल गर्न नसकेका बस्नेतलाई आफू सङ्गीतमा एकोहोरो लागेर परिवारले पाएको दुःखका कारण बेलाबेला पछुतो पनि लाग्थ्यो तर श्रोताले उनीप्रति देखाएको सद्भावका कारण सबै किसिमको दुःखकष्ट उनी सहन तयार भए ।
कुमार बस्नेतका बुबाले उनलाई धेरै पढाएर अरु नै केही बनाउने सपना देखेका थिए तर उनी बुबाको इच्छा अनुसारको बन्न नसकेनन्, त्यसकारण बस्नेत यो उमेरमा पनि आफ्नो बुबाको अगाडि पर्न निकै डराउँछन् ।
आजभोलि कुमार बस्नेत गायनमा कम र सांगीतिक संस्थाहरुमा बढी सक्रिय भइरहेका छन् । उनी नेपाल सांगीतिक संघको-संरक्षक, सांस्कृतिक सम्बर्धन परिषदको-अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र संघको-मानार्थ सदस्य, शिक्षा मन्त्रालय युनेस्कोको-सदस्य र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण मञ्चको-अध्यक्ष रहेका छन् । यीमध्ये प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण मञ्चमा बढी क्रियाशील बस्नेत यसै संस्थामार्फ नेपाली श्रष्टाहरुको हकहितको मुद्दा उठाउने र सर्जकहरुलाई आफ्ना सिर्जनाको सुरक्षाका लागि सचेत बनाउने अभियानमा छन् ।
के घर के डेरा, पच्चीस वसन्त, बदलिँदो आकास, आदिकवि भानुभक्तजस्ता चलचित्रहरुमा समेत गरी लगभग २०० जति लोकगीतहरु आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराइसकेका बस्नेत सांगीतिक भ्रमणको क्रममा सबैभन्दा बढि विदेश जाने नेपाली कलाकारमध्येमा पर्छन् । उनले सन् १९७४ मा फ्रान्स, बेल्जियम र जर्मनीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय लोकनृत्य प्रतियोगिता र सन् १९७८ मा बंगलादेशमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गाला नाइटमा नेपालको तर्फबाट भाग लिएका छन् । त्यस्तै सांगीतिक भ्रमणको अवसरमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, फ्रान्स, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, बर्मा, अमेरिका, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, ब्रुनाई, हङकङ, बेलायत र इटालीजस्ता देशहरुमा पगिसकेका छन् ।
नेपाली लोकसङ्गीतको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेबापत् कुमार बस्नेत गोरखा दक्षिण बाहु, त्रि-शक्तिपट्ट-तेस्रा, वीरेन्द्र ऐर्श्वर्य सेवा पदक, रत्न रेकर्ड पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, धर्मराज थापा सावित्री पुरस्कार, सीताराम पुरस्कार राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, नारायण गोपाल सङ्गीत पुरस्कार, लुनकरणदास साहित्य पुरस्कार, हिट्स एफएमको लाइफटाइम एचिभ्मेन्ट अवार्ड २००६ जस्ता सम्मान, पदक र पुरस्कारहरुले सम्मानित भइसकेका छन् ।
सम्मानको क्रममा कुमार बस्नेत केही विदेशी सम्मानहरुबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन् । यसक्रममा उनी सन् १९८० मा भारतद्वारा हु इज ही इन एसियाका लागि र सन् १९९८ मा जापानद्वारा हु इज हु इन् एसियाका लागि र सन् २००२ मा अमेरिकाद्वारा म्यान अफ दि इयरका लागि छानिइसकेका छन् । त्यसैगरि भिजिट नेपाल १९९८ मा म्यानचेष्टर र लण्डनबाट सांस्कृतिक राजदूतको रुपमा उक्त शहरका मेयरहरुबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन् ।
२०४९ सालमा अधिकृत प्रथम श्रेणीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका कुमार बस्नेतको जीवनमा अहिले कुनै पनि किसिमको असुविधा छैन । जवानीमा जस्तो अहिले उनी धेरै रक्सी पिउदैनन् तर पनि अम्मलको रुपमा चूरोट त्याग्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि याक चूरोटका पारखी बस्नेतको स्वरमा चूरोटका कारण केही खराबी आएको छ जसका कारण गीत गाउँदा र बोल्दा समेत उनलाई खोकीले निकै सताउँछ ।